Wp/blk/ဝေင်ꩻအန်ကာရာ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဝေင်ꩻအန်ကာရာ
ဝေင်ꩻအန်ကာရာ (အဲင်းကလေတ်: Ankara) (တူရကီ: ) ကရီးခါ ကဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ ဝေင်ꩻအန်ဂိုရာ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ တူရကီခမ်းထီ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ သူလခွန်ဟော်ခမ်ꩻ ကအိုပ်စိုꩻခိန်ႏကို ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ "ဝေင်ꩻအစ်သတန်ဗူ" တဲင် ထွိုင်ႏထွာလွဉ် ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီထွူမꩻ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလွေꩻ ဝေင်ꩻအန်ကာရာ တဲင် ထွာဒျာႏ အဝ်ႏခေတ်လီꩻ ခြုဲင်းပြောင်ꩻလွေꩻ ခေတ်တသာအနေႏလဲ့ ရိုꩻလꩻဒျာႏသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၃ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ ဝေင်ꩻအန်ကာရာကိုနဝ်ꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ ၄,၄၁၇,၅၂၂ ဖြာꩻ (၄.၄ သန်း) နဝ်ꩻသွူ။
မိဉ်ꩻလင်(ဖုံႏ): တူရကီသꩻရာႏ (Heart of Turkey)
Lua error in Module:Wp/blk/Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Wp/blk/Location map/data/Turkey" သည် မတည်ရှိနေပါ.Location within Turkey
ကိုဩဒိနိတ်: 39°55′48″N 32°51′00″E﻿ / ﻿39.93000°N 32.85000°E﻿ / 39.93000; 32.85000ကိုဩဒိနိတ်: 39°55′48″N 32°51′00″E﻿ / ﻿39.93000°N 32.85000°E﻿ / 39.93000; 32.85000
en:Mansur Yavaş (Template:Wp/blk/Polparty)
ဧရိယာႏTemplate:Wp/blk/Turkey district areas
၂၄,၅၂၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၉,၄၆၈ စတုရန်းမိုင်)
၂,၇၆၇.၈၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁,၀၆၈.၆၇ စတုရန်းမိုင်)
၉၃၈ မီတာ (၃,၀၇၇ ပေ)
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၂၁ ဗာႏ ဒီသဉ်ဗာ ၃၁)
• ဝေင်ꩻကို တချ
၁,၈၆၃/km၂ (၄,၈၃၀/sq mi)
၂၃၄/km၂ (၆၁၀/sq mi)
တူရကီအခိန်ႏအွိုင်ꩻ TRT (UTC+3)
အမေႏရိကန်ႏဒေါ်လာ 70.533 ဗီလီယံ
0.855 – ထိုမွေး
တကျွိုက်တဝ်း သူလတန်ခွန်ဟော်ခံꩻ အိုပ်ချုတ်ရေꩻစနိစ်သား ကထွာဒါႏ တူရကီခွိုꩻရက်တဗူႏနဝ်ꩻ ဖွဲးဗူႏလွေꩻခန်း ခေးပြဲင်ႏဖက် အစိုးရအစွိုꩻ ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၂၀ ဗွေ ဝေင်ꩻအန်ကာရာကိုနဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ယားကုဲင်ထိုꩻသွူ သူလတန်ခွန်ဟော်ခံꩻ အိုပ်ချုတ်ရေꩻစနိစ်တဲင် တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻခမ်း "တူရကီခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီတန်" တဲင် တွိုႏခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၂၃ ဗာႏကို အွဉ်ငါတန် ကီမားအာတာတတ်နဝ်ꩻ အုံသွူ ရန်ႏသူႏဖုံႏ အီႏလွဉ်ဗွော့ꩻဗာႏ ကယပ်ꩻခုဲင်ႏဒါႏ ခင်ႏလမ်းကိုတဲင် ကဖွဲ့ဗူႏသော့ꩻဒါႏ ခေးပြဲင်ႏဖက်အစိုႏရစွိုꩻ ဝေင်ꩻအန်ကာရာယိုလဲ့ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻခန်း "တူရကီခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ" နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၃၀ ဗွေ အဝ်ႏမူလအမိဉ်ꩻ "အန်ဂိုရာ" ယို ဖန်ပြောင်ꩻလွေꩻခန်း "အန်ကာရာ" နဝ်ꩻသွူ။
အွိုးပွိုင်းလဲင်ႏကရီးခါ ကအဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ အန်သီရာ၊ ယိုခါဝေင်ꩻအန်ကာရာနဝ်ꩻ ဗီသီသိုမ်ရျာꩻဗူႏရပ်ကို အဝ်ႏထွာဖို ခရဲင်ႏဝေင်ꩻတန်တဝေင်ꩻတဲင် ဗီသီ ၂၅ ရျာꩻဗူႏနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻ ရောမပဲင်ႏ ဂလေးသျားနယ်ႏ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏသော့ꩻထိုꩻ ပါးသဉ်း၊ အာရပ်၊ တူရကီ စဒါႏခမ်းထီဖုံႏ စူဆꩻလ့ကို အရန်းရန်းနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏခရိစ်နေင်ႏ ၁၃၆၀ ဗွေနဝ်ꩻ ထဲ့ꩻသော့ꩻထိုꩻ အောက်တိုမန်တူရကီသီး အိုပ်ချုတ်ခံႏစူကိုနဝ်ꩻသွူ။
ထွိုင်ႏထွာလွဉ် တူရကီခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ဝေင်ꩻအန်ကာရာယို နေးတောမ်ႏ ဂျာမန်ဗိသုကာႏ အစွဲးအကမ်းတဲင် ဖေႏကထွာလွေꩻ ထွꩻခေတ်တောမ်ႏ ဖေႏကကဲက်ညီႏတောမ်ႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ ဝေင်ꩻတဝေင်ꩻတဲင် မွဉ်းဖျင်လွေꩻယင်းနဝ်ꩻမꩻ ယိုခါဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထင်ႏထိုလွဉ်ဒါႏ လမ်းပါႏဖုံႏ၊ အစိုႏရရွုမ်ꩻတန်ဖုံႏ၊ တဖူꩻတန်တဖူꩻပေႏဖုံႏ၊ အရွိုးပြေႏတာႏ ကဝ်ႏခြံဥယျာဉ်ႏဖုံႏ၊ လွတ်တောႏ၊ တက္ကသိုလ်ႏ၊ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻပေႏတန်ဖုံႏ လွိုင်ႏကွုန်ꩻအဝ်ႏအာလွဉ်ဝေင်ꩻကိုတဲင် ကွုန်ဟွိုင်ꩻလွဉ်ဒါႏ ဝေင်ꩻတဝေင်ꩻဒျာႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝေင်ꩻလီꩻအခဝ်ကိုနဝ်ꩻ ဗꩻတွိုႏယိုခါ တဖူꩻအဲဉ်ႏဖုံႏ၊ တောမ်ႏခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ တကဲက်ညီႏတဝ်းဒါႏ လိုꩻအုံရပ်ကွက်ခင်ႏလမ်းဖုံႏ အဝ်ႏနေကနဝ်ꩻသွူ။
↑ Ankara Province / Metropolitan municipality (25,653.46 km² including lake / 24,521 km² excluding lake) isaprovince (Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Wp/blk/Exponential search' not found.) of Turkey which has 25 districts (Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Wp/blk/Exponential search' not found.), and9of these districts form the urban area of Ankara city (2,767.85 km² including lake).
Altındağ = 174.53 km²
Çankaya = 267.61 km²
Etimesgut = 49.19 km²
Gölbaşı = 738.30 km²
Keçiören = 189.88 km²
Mamak = 478.40 km²
Pursaklar = 251.52 km²
Sincan = 344.26 km²
Yenimahalle = 274.16 km²
↑ Markov Chains Based Land Cover Estimation Model Development: The Case Of Ankara Province။ Ankara University (www.ankara.edu.tr)။ International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42; pg.650-667 (10 June 2020)။
↑ 3.0 3.1 TURKEY: Ankara City။ Citypopulation.de။
↑ Nüfus ve Demografi - Toplam Nüfus (kişi) (the year is updated)။ Turkish Statistical Institute (www.tuik.gov.tr)။
↑ The Results of Address Based Population Registration System, 2021။ Turkish Statistical Institute (31 December 2021)။
↑ Ulusal Hesaplar - Kişi başına GSYH ($) (the year is updated)။ Turkish Statistical Institute (www.tuik.gov.tr)။
↑ Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/ဝေင်ꩻအန်ကာရာ&oldid=5483071"
Last edited on2July 2022, at 03:44